အမြဲတမ်းအလုပ်သမားများခေါ်ယူရန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ | RayHaber | raillynews
19 / 12 / 2019 ဂျော့ဘ်, အထွေထွေ
ကမ်းရိုးတန်းလုံခြုံရေး command ကို
ကမ်းခြေစောင့်ရေငုပ်ပင်လယ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအထောက်အကူပြုစစ်ဌာနချုပ် URKUR မူလတန်းကျောင်းမှသင်တန်းဆင်းများသည် KPSS မှခြွင်းချက်မရှိ ၀ န်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၁၆ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ကမ်းခြေစောင့်တပ်မှူးကိုအမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုကလျှောက်ထားမည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်ကိုကြေငြာကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
1. လျှောက်လွှာများကိုဆမ်ဆမ်ပြည်နယ်အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း / ခရိုင်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိတင်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ : www.iskur.gov.tr မှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
2. အလုပ်ခွင်ထဲမှာ Employed ခံရအပေါ်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များရန်လိုမုန်းထားခြင်းမရှိဘဲ, တူရကီနိုင်ငံသားဖြစ်တူရကီ, အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအတွက်သူတို့ထဲကတူရကီနိုင်ငံခြားရေးမြင့်မြတ်သောအမှတ် 2527 နိုင်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာအမည်ခံနှင့်ဝိဇ္ဇာ။
3. ကြေငြာသည့်နေ့၌အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်၊ အသက် ၃၆ နှစ်အောက် (18 နှင့်နောက်ပိုင်း) မဖြစ်ရန်။
4. အလုပ်သမားအင်အားတောင်းဆိုမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောဌာနများမှဘွဲ့ရသူများသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာတင်ရန်နောက်ဆုံးရက်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများသည်အလုပ်သမားအင်အား (ဌာနခွဲ) တစ်ခုကိုသာလျှောက်ထားနိုင်သည်။ တရားဝင်ပညာရေးပြီးသူများသည်လျှောက်ထားလို့မရပါ။
5. စစ်မှုထမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့် (သို့) ရွှေ့ဆိုင်းထားသူများသည်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
6. ၀ ယ်ယူခြင်းကိုပြည်နယ်အဆင့်တွင်ဖုံးအုပ်ပြီးဆမ်ဆမ်တွင်နေထိုင်သူများသည်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏လိပ်စာအခြေပြုလူ ဦး ရေစာရင်းသွင်းခြင်းစနစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပထမဆုံးနေထိုင်သည့်လိပ်စာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ လျှောက်လွှာကာလအတွင်းဆမ်ဆန်တွင်နေထိုင်သောလျှောက်ထားသူများကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
7. နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်နိုင်ငံတော်၏ကာကွယ်ရေးဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများ၊ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သူလျှိုလုပ်ခြင်း၊ ခိုးယူမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ လိမ်လည်မှု၊ ယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားမှု၊ ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်မှောင်ခိုခြင်းမှရရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငွေခဝါချခြင်း
8. နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုဆန့်ကျင်ရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီမှဆုံးဖြတ်ထားသည့်အဆောက်အအုံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အုပ်စုများသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်း၊
9. အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်၊ ဤအဖွဲ့အစည်းများအားကူညီရန်၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုဤအဖွဲ့အစည်းများအားပံ့ပိုးရန် (သို့) အသုံးမပြုရန်၊
10 ။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများအသုံးချခြင်းကိုမခံရရန်။ ၁၁။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်အညီပြည်သူ့ရုံးသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်မှထုတ်ပယ်ခြင်းမပြုရ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပုဒ်မ ၅ အပိုဒ် ၅ တွင်ဖော်ပြထားသည့် ဦး စားပေးအခြေအနေများအားအလုပ်သမားများအားအလုပ်ခန့်အပ်ရာတွင် ဦး စားပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမှပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့အလုပ်ခန့်အပ်ရာတွင်အသုံးပြုရမည်။ (စာမေးပွဲမယူကြသူကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ပင်လယ်နက်ပြုပြင်ရေးပံ့ပိုးမှုစစ်ဌာနချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့ကြသူမြား၏ ဦး စားပေးအခွင့်အရေးများ, သူတို့လျှောက်ထားခဲ့ကြေငြာရန်, ဒါပေမယ့်စာမေးပွဲယူကြပြီမဟုတ်သူကိုအင်အားကြီး majeure မှလွဲ။ အင်အားနှင့်အတူလိုက်နာကြပြီမဟုတ်, အလုပ်ကိုပယ်ချသို့မဟုတ်အများပြည်သူအတွက်အမြဲတမ်းအလုပျသမားမြား၏အခွအေနေ၌အခြေချနေထိုင်ကြပြီ။ )
13 ။ နှုတ်ဖြင့် / လက်တွေ့စာမေးပွဲကိုပွင့်လင်းသောအလုပ်နေရာများတွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ နှုတ်ဖြင့် / လက်တွေ့ကျသောစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရမည့်လျှောက်ထားသူများကို Notary ၏ရှေ့မှောက်၌မဲချခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ သူသည်လက်မှတ်ရေးထိုးသူစာရေးတံကိုစာရေးခြင်းဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ခေါ်ဆောင်သွားမည်။ တစ်ဦး။ လျှောက်ထားသူအားလုံး၏စာရင်းမှပွင့်လင်းသောလုပ်သားအင်အား ၄ ဆ၊ ခ။ တောင်းဆိုချက်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဦး စားပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့်လျှောက်ထားသူအားလုံး၏စာရင်းတွင်လစ်လပ်သောလုပ်သားအင်အားအရေအတွက်နှင့်အစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက်အား ၄ ဆခွဲခြားသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ထီဆုကို ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်တွင်နံနက် ၁၃း၀၀ မှ ၁၆း၀၀ အတွင်း Mustafa Dağıstanlıအားကစားခန်းမတွင်ကျင်းပမည် (Hançerli Mh ။ Atatürk Blv ။ No:4İlkadım / SAMSUN) ။ မဲနှိုက်ခြင်းကြောင့်နှုတ်နှင့်လက်တွေ့စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရှိသူများစာရင်းကိုကမ်းခြေစောင့်တပ်မှူးအင်တာနက်ပုံစံစာမျက်နှာတွင်တွေ့နိုင်သည်။www.sg.gov.t ဖြစ်ပါသည်တစ် ဦး အကြောင်းကြားစာအဖြစ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။
14 ။ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ Black Sea Repair Support Command သည်လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားမဲဆန္ဒနယ်မှသတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းပြည့်မှီသောနှင့်အစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတွင်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများရှိမရှိစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောလျှောက်လွှာများကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရန်လျှောက်ထားသူများနှင့်စာရွက်စာတမ်းကိုထိန်းချုပ်သည့်နေ့ရက်ကိုကမ်းခြေစောင့်တပ်မှူး၏အင်တာနက်လုံခြုံရေးစာမျက်နှာတွင်တွေ့နိုင်သည်။www.sg.gov.t ဖြစ်ပါသည်တစ် ဦး အကြောင်းကြားစာအဖြစ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။ စာရွက်စာတမ်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်တောင်းခံသည့်စာရွက်စာတမ်းများ၏မိတ္တူများကိုမိတ္တူကူးယူပါ။
15 ။ စာရွက်စာတမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်အဖြစ်အစားအဘယ်သူ၏လျှောက်လွှာကြောင့်စာရွက်စာတမ်းမှားယွင်းတဲ့သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေစာရွက်စာတမ်းမှလက်ခံသည်မဟုတ်, မဲနှိုက်အတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်ရွေးချယ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏, နှုတ် / လက်တွေ့စာမေးပွဲသည်အဘယ်သူ၏အပြည့်အဝပထမ ဦး ဆုံးစာရွက်စာတမ်းအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းကနေစတင်လက်ခံလိမ့်မည်စာရေးတံ။
16 ။ နှုတ်ဖြင့် / လက်တွေ့စာမေးပွဲရက်၊ အချိန်နှင့်နေရာနောက်ပိုင်းကမ်းခြေစောင့်တပ်မှူး၏ဝဘ်ပုံစံစာမျက်နှာ (www.sg.gov.t ဖြစ်ပါသည်) အကြောင်းကြားစာ၏သဘောသဘာဝအရကြေငြာလိမ့်မည်။
17 ။ နှုတ်ဖြင့် / လက်တွေ့ကျသောစာမေးပွဲကိုလျှောက်ထားသူများ၏ကျွမ်းကျင်မှုဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရည်အချင်းများကိုတိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ Black Sea Repair Support Command တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ၁၈။ ပါးစပ် / လက်တွေ့စာမေးပွဲတွင်အောင်မြင်မှုရရန်အနည်းဆုံးရမှတ် ၆၀ (၆၀) ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ လျှောက်ထားသူအားလုံးသည်ရမှတ် ၁၀၀ (တစ်ရာ) ကျော်တွင်အကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ မေးလ်ကိုအကြောင်းကြားမည်မဟုတ်ပါ
19 ။ လျှောက်ထားသူများသည်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်မော်ကွန်းတိုက်သုတေသနကိုနိဂုံးချုပ်ရမည်။
20 ။ စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေသည်အလုပ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အတွက်အဆင်မပြေကြောင်းအတည်ပြုသင့်သည်။ ၄ င်းတို့အနေဖြင့်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အစည်း (SSI) မှအခွင့်အာဏာရှိသောပြည့်စုံသောကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှရရှိမည်ဖြစ်သောကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ရမည်။ ကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့သည်အစီရင်ခံစာများကိုအတူတကွအကဲဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းတို့လုပ်ဆောင်မည့်အလုပ်နှင့်သင့်တော်ကြောင်းဖော်ပြသည့်ကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများကိုလုပ်ငန်းခွင်ဆရာဝန်မှတင်ပြလိမ့်မည်။